Xildhibaanadii wadey mooshinka looga soo horjeedo R/wasaare Saacid oo la kala fur furaayo. – idalenews.com
Isku dayo lagu doonayo in lagu baajiyo mooshinka ka dhanka ah Xukuumada Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa ka socda magaalada Muqdisho, iyadoo isku dayadan ay yihiin kuwo dhinacyo kala duwan ka socda.
Maalinta arbacada ayaa lagu wadaa in Xukuumada Ra’iisul Wasaare Saacid ay hortagto Baarlamaanka, si codka kalsoonida loogu qaado, kadib markii laga gudbiyay mooshin kalsooni soo weydiisasho baaralmaanka ah.
Kulamo ayaa si dar dar ah uga socday beryihii u dambeeyay Hotelada Muqdisho iyo xafiisyada madaxda dowladda, kaasoo ay xildhibaanada baarlamaanka ay kula shirayeen inay ka baaqsadaan mooshinka.
Mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee abaabulka ugu jiray in Mooshinka la fashiliyo ayaa sheegay inay inta badan xildhibaanadii mooshinka waday ay ku qanciyeen inay joojiyaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wasiirkiisa Arrimaha gudaha C/kariin Xuseen Guuleed ayaa habeen hore kulan saacado qaatay la yeeshay Mudanayaal ka soo jeeda Beelaha Hawiye, iyagoo ka dalbaday inay ka baaqsadaan mooshinka.
Wararka ayaa sheegaya in Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo maalmaihii u dambeeyay waday olole xoog leh oo isugu jiray mid bulshada qeybaheeda kala duwan ku kicinayay si ay uga hadlaan mooshinka Xildhibaanada ay wadaan.
Ololaha ka socday Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa hogaamineysay Xildhibaanad Caasho Xaaji Cilmi oo ah xaaska Ra’iisul Wasaaraha oo galaan gal ku leh bulshada qeyabheeda kala duwan.
Waxaa la leeyahay cabsidii ka jirtay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha waa yaraatay, kadib markii la helay tiro ku filan mudanayaasha baarlamaanka ee bad baadin kara Ra’iisul Wasaaraha marka ay timaado in codka kalsoonida loo qaado.
Xildhibaanada qaar ee kala fur furay ayaa loo adeegsaday habab kala duwan, iyadoo la sheegayo in inta badan mudanayaasha mooshinka ku lug lahaa, balan qaadyo loo sameeyay, inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn.
Maalmihii u dambeeyay ayaa guuxa magaalada uu ahaa mooshinka ka dhanka ah Ra’iisul Wasaare Saacid, ee la doonayo in meesha looga saaro Xukuumadiisa oo wajaheysay dhaliilo arrimaha gudaha iyo waxqabad la’aan xaga ammaanka.